Vaovao - miharatra mandritra ny taona maro
Raha heverinao fa ady maoderina ny tolon'ny lehilahy manala ny volo tarehy dia misy vaovao ho anao. Misy porofo arkeolojika fa, tamin'ny vanim-potoana farany vato dia nisy lehilahy voaharatra volontany, obsidian, na clamshell, na koa clamshells nampiasainy toy ny tweezers. (Ouch.)
Taty aoriana, ny lehilahy dia nanandrana tamin'ny hareza varahina, varahina ary vy. Ny mpanankarena dia mety nanana mpanety manokana ho an'ny mpiasa, fa ny sisa taminay kosa dia tokony hitsidika ny fivarotana mpanety. Ary, nanomboka tamin'ny Moyen Âge, dia mety namangy ilay mpanety koa ianao raha mila fandidiana, fampidiran-dra, na nify nalaina. (Vorona roa, vato iray.)
Tato ho ato dia nampiasa ny hareza mahitsy vy ny lehilahy, antsoina koa hoe "tendan-tenda" satria… tsara, ny miharihary. Ny endriny toy ny antsy dia midika fa tsy maintsy nohamafisina tamin'ny vato nifatotra na fehikibo hoditra, ary nitaky fahaiza-manao marobe (mba tsy hilazana ny fifantohana tahaka ny tamin'ny laser) ampiasaina.
NAHOANA NO NOMBONANTSIKA NISAISAKA EO AMIN'NY TOERANA VOALOHANY?
Noho ny antony maro dia hita izany. Noharatry ny egyptiana taloha ny volombavany sy ny lohany, angamba noho ny hafanana ary angamba fomba iray hitazomana ny moka. Raha noheverina ho tsy volo hitombo volo tarehy, ny farao (na dia ny vavy aza) dia naka volombava sandoka tahaka ny andriamanitra Osiris.
Ny volon-koditra taty aoriana dia noraisin'ny Grika nandritra ny fotoana nanjakan'i Alexander the Great. Ny fanao dia namporisihana betsaka ho fepetra fiarovana ho an'ny miaramila, manakana ny fahavalo hisambotra ny volombavany amin'ny ady an-tanana.
FANAMBARANA FASHION SA FAUX PAS?
Ny lehilahy dia nifankatia tamim-pitiavana tamin'ny volo tarehy hatramin'ny voalohany. Nandritra ny taona maro, ny volombava dia hita ho tsy misavoritaka, tsara tarehy, filàna ara-pivavahana, mariky ny tanjaka sy ny fahalemem-panahy, maloto tanteraka, na fanambarana politika.
Mandra-pahatongan'i Aleksandra Lehibe dia ny volombavany taloha ihany no nanapaka ny volombavany tamin'ny fotoanan'ny alaona ihany. Etsy ankilany, ny zatovolahy romanina tamin'ny taona 300 talohan'i JK dia nanao fety "voaharatra" voalohany hankalazana ny maha olon-dehibe efa antomotra azy ireo, ary ny volombavany ihany no nampitombo ny volombavany rehefa nisaona.
Tamin'ny andron'i Julius Kaisara dia nanahaka azy ny lehilahy romana tamin'ny famongorana ny volombavany, ary avy eo i Hadrian, Emperora romana tamin'ny taona 117 ka hatramin'ny 138, dia namerina ny volombava.
Ireo filoham-pirenena amerikana 15 voalohany dia tsy nisy volombava (na dia i John Quincy Adams sy i Martin Van Buren aza dia nilalao muttonchops mahavariana.) Avy eo dia voafidy i Abraham Lincoln, tompon'ny volombava malaza indrindra tamin'ny fotoana rehetra. Nanomboka fironana vaovao izy - ny ankamaroan'ny filoham-pirenena izay nanaraka azy dia nanana volo tarehy mandra-pahatongan'i Woodrow Wilson tamin'ny 1913. Ary nanomboka tamin'izay dia efa voaharatra avokoa ny filohantsika rehetra. Ary maninona no tsy? Efa lasa lavitra ny fiharatana.